Wasiir Islow oo si kulul uga hadlay Wararka sheegaya in ciidamo la dhigay hoyga Shiikh Shariif | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Wasiir Islow oo si kulul uga hadlay Wararka sheegaya in ciidamo la...
Wasiir Islow oo si kulul uga hadlay Wararka sheegaya in ciidamo la dhigay hoyga Shiikh Shariif
Qoraal uu soo dhigay wasiirku bartiisa facebook ayuu intaas ku daray in wararkaas ay faafinayaan rag masuuliyad sheeganaya oo ujeedkoodu yahay iney colaad iyo fitno ka abuuraan dalka.
Waxaan ugu baaqayaa Soomaalida iyo gaar ahaan dadka mas’uuliyiinta ah inay iska hubiyaan wararka ay bulshada la wadaagayaan ee keeni kara kicin colaad iyo Amni darro”ayuu yiri Wasiir Ducaale.
Xildhibaano mucaarad ah oo ay ka mid yihiin Mahad Salaad iyo Axmed Macalin Fiqi ayaa barahooda ku baahiyey in dowlada Somalia ay ciidamo dul dhigtay hoyga madaxweynihii hore Shiikh shariif arrintaasoo ay sheegeen iney keeno karto dhibaato cusub iyo qalalaase.
Next articleMadasha Xisbiyada Qaran oo eedeymo xasaasi ah u jeedisay dowlada Somalia
Akhriiso”5 sano ka hor maanta oo kale: Baarlamaankii hore ayaa ansixiyay mid ka mid ah Sharciyadii dalka ugu muhiimsanaa
Nicholas Heysom oo dowlada Soomaaliya hordhifay arin xasaasi ah oo kusaabsan Rooboow iyo Warqadna U Dirtay Wasiirka Amniga
XOG CUSUB: Maxaa ka jira in Kaamerooyinka Xarunta G/Banaadir (CCTV) la damiyey Qaraxa ka hor..?
Daily Nation oo Shaaciyey xogta wixii dhex maray Farmaajo iyo Kenyatta & Qodob la isku mari waayey
Aqriiso:Soomaaliya iyo cudurka Coronavirus: Halis qarsoon
xog cusub Gaas, Xaaf & Axmed Madoobe oo ka tashanaya go’ankooda xubnaha ay waayeen
Arday Isku Dishay Sababo La Xiriira Natiijadda Hoose Ee Imtixaankooda kayneen
DHAGEYSO:Ururka ONLF oo doortay gudoomiye cusub xili shirar aan kala joogsi lahayn Oga socday Asmara